नेप्सेले 80% लाभांश दिने ? कस्तो बोनस हो अनि कसले पाउने हो ? - Share Gyan
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले ८० प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश दिने योजना अघि सारेको छ। प्राय नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांश मात्र सुन्दै आईरहेको नयाँ लगानीकर्ताहरु नेप्सेले दिने भनेको लाभांशबारे अलि अनविज्ञ हुन सक्छन। आज बिहान मेरो लगानी डट कममा प्रकाशन भएको नेप्सेले ८० प्रतिशत लाभांश दिने, नेप्सेको बोनस शेयर दिने चाहना सरकारको नगदमै जोड, किन चुक्ता पूँजी बढाउन चाहँदैन सरकार? शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछी एकजना हाम्रो सामाजिक संजाल फलो गर्नु हुने प्रयोगकर्ताले हामीलाई यसबारे अझ स्पष्ट पार्न आग्राह गर्नु भएकोले शेयर ज्ञानको यो पोस्टमा हामीले नेप्सेको लाभांश बारे स्पष्ट पार्न खोज्दै छौं।
नेप्सेको लाभांश कस्ले पाउने हो ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको पब्लिक कम्पनी हो। जसरी प्रत्येक कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्नो हिस्साअनुसारको लाभांश पाउँछन् त्यसै गरी नेप्सेले पनि आफ्नो लगानीकर्ताहरुलाई उत्कृष्ट लाभांश बाढ्ने गर्दछ।
नेप्सेले गत वर्ष एक अर्बको हाराहारीमा नाफा गरेको छ। तर, यकिन विवरण भने फाइनल हुने क्रममा छ। यो अवस्थालाई हेर्दा ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने प्रारम्भिक योजना छ। नेपालको शेयर बजारको आकार ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा नेप्सेको पूँजी भने ६० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएकोले पनि उसले चुक्ता पूँजी बढाउन बोनस शेयर दिने प्रस्ताव गर्न लागेको हो। तर सरकार भने संस्थानहरूको चुक्ता पूँजी धेरै बढाउनु हुँदैन भन्ने लाइनमा देखिएको छ। नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर भएकोले अर्थ मन्त्रालयको अनुसार नै नेप्सेको लाभांश प्रस्ताव तय हुने गर्छ।
नेप्सेले कसरी आम्दानी गर्छ ?
सर्वसाधारणले अन्य कम्पनीको शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट खरिदबिक्री गर्दा दुवै पक्षले कारोबार रकमअनुसार दिने कमिसन नै नेप्सेको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो।
नेप्सेको शेयर सर्वसाधारणले किन्न पाउँछ ?
सबैजसो मुलुकमा स्टक एक्स्चेन्ज कै शेयर सर्वसाधारणले कारोबार गर्न पाउँछन् तर नेपालमा भने स्टक एक्स्चेन्जको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिएको छैन।
नेप्सेमा कसको लगानी कति ?
नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंक, कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक तथा बाँकी ब्रोकर लगायत अन्यको स्वामित्व छ। पहिला राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको कुल ३४.६ प्रतिशत शेयरमध्ये बोलपत्रमार्फत २० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको हो। जुन शेयर प्रतिकित्ता ११८० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रभु र लक्ष्मी बैंकले सकारेका थिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रावधानमै नमिल्ने भएकाले स्टक एक्स्चेन्जको शेयर स्वामित्व घटाएको हो।